I-13 yeeKholeji zeeKholeji zaBafundi abane-Autism 2022
Apha, uya kufumana ulwazi oluhlaziyiweyo kwiikholeji zokufunda zabafundi abane-autism kunye nendlela aba bantu bakhethekileyo abanokufaka ngayo isicelo sokufunda.
I-Autism, ekwabizwa ngokuba yi-Autism Spectrum Disorder (ASD) sisifo esichaphazela ukukhula komntu ekunxibelelaneni nasekunxibelelaneni. Esi siphazamiso sichaphazela inkqubo ye-nervous eyenza ukuhlangana kwezentlalo kube nzima, ukuthanda ukuthanda izinto nokuziphatha okuphindaphindayo.
Unobangela ophambili we-autism unokunxulunyaniswa nengxaki yemfuza kwaye inyangwa ngonyango. Iqala ukusuka ebuntwaneni kwaye ukuba uqaphele kwangaphambili inokunyangwa ngemfundo kunye nezinye iindlela zokuziphatha. Akukho lunyango lwayo kwaye aluze luphele ngokupheleleyo, ezi zonyango zinceda kuphela ukubeka imeko phantsi kolawulo.
Abanye abantu abane-autism abakwazi ukunxibelelana ngendlela abanye abenza ngayo, abathethi kakuhle, abakwazi ukubamba ngamehlo, okanye badibane nabanye abantwana. Abanye abantu abane-autistic banako ukwenza ezinye zezi zinto ukuya kuthi ga kwinqanaba.
Aba bantu babodwa bathathelwe ingqalelo ngabantu abanentliziyo ezintle abanesigqibo sokuqalisa iziseko kunye nemibutho yesisa ukubonelela ngezifundo zasekholejini zabafundi abane-autism. Ngokwenyani kukho izifundiswa ngokubanzi zabantu abakhubazekileyo abafundi abanesifo sengqondo abanokufaka izicelo zazo kodwa ezizezinye zabantu abazenzekelayo.
Ezi zifundo zekholeji zabafundi abane-autism zinceda ekuphuculeni iindlela zokukhetha zabafundi kunye nabantu abadala abafunyaniswa benengxaki yokubaxhasa kwimfundo ephezulu.
Ngaphandle kokuqhubeka, makhe singene kwezi ntlobo zezifundo.
Ukufundiswa kweeKholeji zaBafundi abane-Autism
Oku kulandelayo kukufunda ngokukodwa kwabafundi abafumene ukuba uneAutism Spectrum Disorder;
I-Autism iDelaware iScholarship
I-Avonte Oquendo Memorial Scholarship ye-Autism
Umbutho woPhando ngeAustism (OAR)
I-KFM yenza umahluko
UPercy Martinez Autism Scholarship
Uphando lweAustism eTexas (ART)
IOfisi yomthetho kaDavid P. Shapiro Autism Scholarship
Iqela leKelly Law Autism Scholarship Contest
IiOfisi zoMthetho zikaDavid A. Black Autism Scholarship
I-Phoenix Attorneys Autism Scholarship Award
Amazinyo nguJohn Barras, iDDS Autism Scholarship
IVarghese Summersett Autism Scholarship
I-Autism Delaware ngumbutho ozimeleyo ongenzi nzuzo okwi-Delaware. Umbutho uqalwe ngabazali ababelana ngamava aqhelekileyo e-autism ukubonelela abafundi nge-autism ngezixhobo zemali abazakufuna ukulandela ikhondo labo lokukhetha kwiziko eliphezulu.
Umbutho weAutism Delaware ubonelela ngezifundo zekholeji ezimbini ezahlukeneyo zabafundi abane-autism, izifundiswa zezi;
UDaniel noLois Grey Memorial Scholarship: Le mfundo inikezelwa kumfundi one-autism efuna ukulandela isidanga esinxulumene ne-autism kwiDyunivesithi yaseDelaware. Ixabiso le-scholarship yi- $ 1,000
Umntu omdala ngeAustism Scholarship: Esi sisibonelelo sesibini esinikezelwa ngumbutho weAutism Delaware. Le mfundo yeyabantu abadala abane-Autism Spectrum Disorder abangabahlali belizwe laseDelaware kwaye bafuna ukulandela ikholeji okanye imfundo yasemva kwesekondari.
Faka isicelo sobufundi apha.
I-Avonte Oquendo Memorial Scholarship yenye yeekholeji zokufunda kwabafundi abane-autism ezinikezelwa minyaka le yi-Perecman Firm, i-PLLC kubafundi abafunyaniswe ukuba banayo i-autism okanye isizalwane esisondeleyo esinengxaki. Ixabiso le-scholarship yi- $ 5,000 kwaye kukho iimfuno ezithile ezibekiweyo zokufumana le mfundo.
Umfaki-sicelo kufuneka abhalise kwikholeji eyamkelweyo okanye eyunivesithi okanye malunga nokubhala isincoko esinamagama angama-500 ubuncinci kunye namagama ali-1000, kunye nokubhalwa ngokusemthethweni okanye okungekho semthethweni.
Umbutho woPhando ngeAutism (OAR) sisiseko sesisa esasekwa lusapho lakwaSchwallie kwaye sizinikele ekwenzeni ngcono ubomi babantu abaneAutism Spectrum Disorder. Ngeminikelo yosapho kunye namanye amalungu ebhodi, umbutho ungabonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism.
I-OAR ibonelela ngeendlela ezimbini zokufunda zabafundi abane-autism abanokukhetha kuzo, ziyiSchwallie Family Scholarship kunye neLisa Higgins Hussman Scholarship.
ISchwallie Family Scholarship: Usapho lakwaSchwallie ludlala indima enkulu ekumiseni i-OAR kwaye ngalo mbutho ubonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism. I-scholarship ixhasa abafundi abaya kwiziko eliphakamileyo leminyaka emibini okanye emine ukulandela nayiphi na inkqubo yeedigri abazithandayo.
ULisa Higgins Hussman Scholarship: I-OAR ibonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism okanye abajongana nemiceli mngeni yemihla ngemihla enxulumene ne-autism. Ixhasa abafundi ababhalise eyunivesithi yeminyaka emibini, izakhono zobomi okanye iinkqubo zasemva kwesekondari, okanye kwizifundo zobugcisa, zobugcisa, okanye ezorhwebo.
Ukulungela nasiphi na isibonelelo seekholeji sabafundi abane-autism ebonelelwe yi-OAR, kuya kufuneka ube ngumntu ochongiweyo une-autism, kufuneka ubonise ubungqina bokuba ufumanekile, kwaye uya kuya kwiziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo eMelika.
Ixabiso le-scholarship yi- $ 3000, faka isicelo apha.
Kanye njengoko igama lisitsho, i-KFM yenza umahluko ngumbutho ongenzi nzuzo onenjongo eyodwa yokwenza umahluko okanye into elungileyo kubomi babantu abaphila ne-autism. Njengenxalenye yokwenza umahluko, umbutho ubonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism.
Ngubani onokufaka isicelo sale mali?
Abafundi bezikolo eziphakamileyo abane-autism abafuna ukuya kwiziko lasemva kwesekondari
Abafundi abane-autism ababhalise kwinkqubo yekholeji
Vula isicelo kubo bonke abafundi beekholeji abaza kubakho nabangoku abane-autism e-US nakwamanye amazwe.
I-scholarship ixabise i- $ 500 eya kusetyenziselwa ukuhlawulela abafundi imfundo ephezulu.
Isifundi se-KFM sikwafuna amanye amaxwebhu esicelo;
Ileta yokugubungela equka i-bio engekho ngaphezu kwamagama angama-250, inkqubo yeziko eliphezulu eyamkelweyo okanye efunda njengekholeji, ikholeji yoluntu, inkqubo yezobugcisa, njl.njl. , kunye ne-imeyile.
Isincoko kunye neefoto ezintathu ongathanda ukuzibandakanya kwisincoko sakho
UPercy Martinez ligqwetha elaziwayo kwilizwe laseFlorida, eMelika, kwaye ubonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism. Yena, uPercy, ubonelela ngezi zifundo zokunceda abafundi abane-autism kunye nokunciphisa iindleko zemfundo yabo, kunye nokukhulisa isizukulwana esilandelayo sabafundi abaphila ne-Autism Spectrum Disorder.
Imali yokufunda yi- $ 5,000, bona umhla wokugqibela apha.
Ukulungela iPercy Martinez Scholarship kufuneka uhlangabeze ezi mfuno zilandelayo;
Kuya kufuneka uwa kwelinye lodidi; Isikolo samabanga aphakamileyo, isidanga sokuqala, okanye isikolo se-autism
Gcwalisa naluphi na udidi
Thatha inxaxheba kwinkqubo nokuba livolontiya okanye umfundi
Ubonise umdla kwezemfundo
Kutshanje ubhalise kwisikolo esivunyelweyo
Iileta ezimbini zokucebisa
I-3-4 imizuzu yevidiyo okanye isincoko samagama ayi-100-600 ngesihloko Zithini iingcinga zakho ngekamva lemfundo?
Uphando lwe-Autism ngumbutho osekwe eTexas ukunceda abantu abaphila ne-autism nangayiphi na indlela abanokuyenza. Baqhuba iiprojekthi zophando kwaye banikezela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism ekuncedeni kwimfundo yabo ephezulu okanye babaqeqeshele imisebenzi.
Isifundi esixabisa i $ 500 kwaye sinikezelwa rhoqo ngonyaka, ke ukuba uyaphoswa kulo nyaka ungasoloko ujonga kunyaka olandelayo. Kuya kufuneka uhlangabeze ezi mfuno zilandelayo zokufaneleka.
Umhlali waseTexan ofunyenwe ene-Autism Spectrum Disorder ogqibe isikolo esiphakamileyo okanye ofumene i-GED. Yamkelwe kwiziko eliphakamileyo njengekholeji, isikolo sezorhwebo, uqeqesho lomsebenzi, eyunivesithi, okanye ikholeji yoluntu.
Ileta yokugubungela echaza ukuba kutheni usukela imfundo yamabanga aphakamileyo kunye nezicwangciso zakho zengqesho
Ubungqina bokuba une-Autism Spectrum Disorder
Jonga umhla wokugqibela apha
IOfisi yoMthetho kaDavid P. Shapiro kule minyaka mine idlulileyo ibonelela ngezifundo zasekholejini zabafundi abane-autism abafuna ukuqhubeka nemfundo yabo kwiziko eliphezulu. Isifundi siya kusetyenziselwa ukuhlawula inxenye yokufunda kwizifundo zekholeji okanye kwiziko lobugcisa.
Ukufaka isicelo sobufundi, kuya kufuneka unikezele ngobungqina bokuba ufumene i-ASD kwaye uzimisele ukuqhubeka nemfundo yakho.
Iqela likaKelly Law linikezela ngezifundo zekholeji ezi- $ 1,000 zabafundi abane-autism yokurhola izifundo zabo okanye ezinye iimali ekuqhubekeni kwabo nemfundo ephezulu. Isifundi sasungulwa ukukhuthaza aba bafundi bakhethekileyo ukuba baqhubeke nenkqubo kwikholeji okanye kuqeqesho lomsebenzi.
Abafakizicelo kufuneka bevela eUnited States kwaye babonelele ngesincoko esifikelela kumagama ayi-100 achaza ukuba ukuqhubeka kwemfundo yakho kuya kuyiqhubela phambili njani injongo yakho yomsebenzi kunye nesincoko esinokuzikhethela esifikelela kumagama ayi-1,000 XNUMX abalisa ngendlela iAutism Spectrum Disorder ethe yaba nefuthe ngayo kwiinjongo zakho zemfundo umhla.
IiOfisi zoMthetho zikaDavid A.Mnyama waphinda wanikezela ngeedola ezili-1,000 XNUMX zeekholeji zabafundi abane-autism abafuna ukuqhubela phambili imfundo yabo nakweyiphi na ikholeji eyamkelweyo okanye uqeqesho lomsebenzi. Le nkxaso-mali iya kubaxhasa aba bafundi bakhethekileyo ukuba baqhubeke nezifiso zabo zemfundo.
Abafakizicelo kufuneka babe ngabemi baseMelika. Faka isicelo sobufundi apha.
Le yinkampani yezomthetho eyonwabisayo ekuncedeni abafundi abane-autism, ukubabonelela ngezifundo abanokuzisebenzisa ukukhawulezisa okanye ukunciphisa iikholeji, iyunivesithi, okanye umrhumo woqeqesho lomsebenzi. Isixa semali yokufunda yi- $ 1,000 kwaye ivulelekile kubemi baseMelika abafuna ukuqhubela phambili imfundo yabo kwiziko eliphezulu.
Le ngxowa-mali inikezelwa kubafundi abafumene isifo se-Autism Spectrum Disorder esiya kuthi sisetyenziswe kwikholeji okanye eyunivesithi. Isifundi sasungulwa nguGqirha John Barras ukukhuthaza abafundi abane-autism ukuba baqhubeke nomsebenzi abawukhethayo kwiziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo.
Iimfuno zesicelo zibandakanya isincoko esinamagama angaphezu kwe-150 kunye nesincoko esinokuzikhethela esinamagama angama-800 esichaza ukuba i-ASD ibe nefuthe njani kumava akho ekufezekiseni iinjongo zakho zemfundo.
Incight ibonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism kunye nabantu abakhubazekileyo. Yisifundi esiqhelekileyo sabantu abakhubazekileyo abafuna ukulandela imfundo ephezulu kwikholeji eyamkelweyo, eyunivesithi, okanye kwiziko lobugcisa.
Ukuze babe nokufanelekela isifundi se-Incight, abafaki-zicelo kufuneka bafunyaniswe bene-autism okanye olunye ukhubazeko kwaye babonise ubungqina, babe ngumhlali waseWashington, Oregon, okanye eCalifornia. Abafundi kufuneka babonise ukusebenza ngokugqwesileyo kwezemfundo kunye nenkonzo kuluntu lwabo ukuphumelela eli bhaso.
I-Varghese Summersett inceda abantu abaphila nokhubazeko olunye okanye olunye olunjenge-Down syndrome kunye ne-autism. Ibhaso libonelela ngezifundo zekholeji zabafundi abane-autism ekuncedeni ukuhlawula iifizi zokufunda kwikholeji, eyunivesithi, okanye uqeqesho lomsebenzi.
Ukuze bakwazi ukufumana isifundi, abafaki zicelo kufuneka babe neminyaka eli-15 ubudala okanye bencinci kwaye babonise ubungqina be-autism ngokuxilongwa. Ibhaso ixabisa i- $ 500, bona umhla wokugqibela kunye nekhonkco lesicelo apha.
Ezi zizifundo zekholeji ezikhoyo ngoku zabafundi abane-autism, amakhonkco esicelo anikezelwe kwiinkcukacha nganye. Funda iimfuno zokufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo ngononophelo ukuze ungenzi naziphi na iimpazamo kwaye uphephe iimpazamo.
Unokufaka isicelo sokuya kwesinye sezi bhasari kodwa ukuba ufumene uhlobo oluthile ngaphambi kokuba ungabinakho ukufaka isicelo salowo njengoko ungasayi kufaneleka ukwenza njalo. Kodwa unokufaka isicelo kwezinye ongakhange uxhamle kuzo.
Nokuba awunayo iAutism Spectrum Disorder, unokufuna ukubonisa esi sithuba kwisihlobo okanye nabani na omaziyo onengxaki yokuphazamiseka. Ukuba esi sithuba asisi sakho, jonga ezi ngcebiso zingezantsi ukuze ubone okungakumbi.
Ukufaneleka kwe-UNICAF Scholarship, iimfuno kunye nesicelo
Izifundo zasimahla zeYunivesithi ezivulekileyo ezingama-38
Izatifikethi zikaRhulumente zasimahla ezikwi-Intanethi
Uluhlu lweFederal Polytechnics eNigeria
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Iingcebiso zescholarship Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship I-United States Scholarship
izifundi zekholeji zabafundi abane-autism
Pingback: Iinkqubo ezili-10 eziPhambili zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente 2021
Pingback: Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZidingo zaseFlorida 2021
Pingback: I-35 + zeZikolo eziBalaseleyo zokuSebenza okuPhezulu kweAutism 2021
URiley Rhodes uthi:
Epreli 13, 2021 kwi-8: 38 pm
Ngelixa ndiyithandayo into yokuba ukukhuthazwa kwemali yokufunda yabantu abane-ASD kwabelwana ngayo kule ndawo, indlela ekuthethwa ngayo ngesi sifo ekuqaleni ngumbono ophelelwe lixesha kunye nongumbono.
“Abantu abane-autism abakwazi ukunxibelelana nabanye ngendlela abathetha ngayo, abafane bathethe, abanakubamba ngamehlo, okanye badibane nabanye abantwana. Zihlala zizodwa kwaye azinxibelelani namazwe angaphandle. ”
Le yindlela eyoyikekayo nengachanekanga yokunxibelelana nabantu abasebenza nge-autism. Ngelixa kukho abantu abane-ASD abangathethiyo, malunga nama-60% abo abanjalo. Banokukwazi ngokupheleleyo ukunxibelelana ngendlela enkulu kwaye "eqhelekileyo". Abanye babo BANGANAKHO ukubamba ngamehlo, ukunxibelelana ngendlela abanye abenza ngayo, kunye nokudibana nabanye abantwana. Ayibobukhulu obulingana zonke iingxaki.
Ndicebisa ukuba nabani na obhale le nto bayazifundisa kwi-Autism Spectrum Disorder ngaphambi kokubeka olu hlobo lwesitetimenti, esikwaziyo, esiphelelwe lixesha, nesingachanekanga emhlabeni.
Epreli 28, 2021 kwi-9: 42 pm
Siyawubulela lo mnikelo. Utshintsho lwenziwe.